Xog: Qoor Qoor, Guudlaawe iyo Lafta-gareen oo xalay kulmay iyo shaki soo galay - Caasimada Online
Home Warar Xog: Qoor Qoor, Guudlaawe iyo Lafta-gareen oo xalay kulmay iyo shaki soo...
Muqdisho (Caasimada Online) – Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in xalay kulan saacado qaatay ay hotelka Decale ay ku yeesheen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, HirShabelle iyo Koonfur Galbeed.
Kulanka Qoor Qoor, Cali Guudlaawe iyo Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa yimid saacado kadib markii ra’iisul wasaare Rooble, oo ay garab taagan yihiin saddexdan madaxweeyne goboleed, uu ku dhowaaqay in dalka uu galayo doorasho hal dhinac ah.
Cali Guudlaawe iyo Lafta-gareen ayaa rumeysan inaysan arrin wanaagsan u muuqan inay go’aan qaataan ayaga oo aan la hadlin mucaaradka. Guudlaawe, waxaa la doortay un laba bil ka hor, oo ma helin fursad uu kula kulmo mucaaradka, halka Lafta-gareen, inkasta oo uu aad ugu xiran yahay Villa Somalia uu doonayo inuu ugu yaraan isu muujiyo mas’uul xal raadinaya.
Illaa iyo hadda ma cadda tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan saddexdan madaxweeyne goboleed.